Ernesto Valverde Ụmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
Home Onye na-ahụ n'anya FOOTBALL Ernesto Valverde Ụmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
LB na-egosi Full Story of a Football Manager onye kacha mara aha na aha otutu aha - € œTxingurriâ € . Anyị Ernesto Valverde Ụmụaka Akụkọ na Iwepụ Akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nchoputa ahu bu ihe ndi ozo na ndu ya, ndu ndi ozo, akuko nke ozo tutu ama aha, bilite na akuko akuko, nmekorita na ndu onwe ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ngwa ngwa ya dị ka onye mbụ Onye na-eme egwuregwu Billeo egwuregwu. Otú ọ dị, nanị ole na ole na-atụle ihe ọmụma Ernesto Valverde nke Biography bụ nke na-akpali mmasị. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Ernesto Valverde Ụmụaka Akụkọ Plus Ihe Ndị Na - Ndụ mbido
Malite ya, aha ya bụ Ernesto Valverde Tejedor. Ernesto Valverde mụrụ na 9th nke February 1964 na Viandar de la Vera, Spain.
Ezinụlọ Ernesto Valverde nwere mgbọrọgwụ ha ìgwè agbụrụ Spanish nke Castile na León ebe ebe Viandar de la Vera dị. Ọ nwekwara ọbara ezinụlọ Basque.
Ernesto Valverde Family Ezigbo. Asụsụ Ndị E Si Nweta Ụwa
Castile na León na-anọchite anya 5.69% nke ndị bi na Spen na ókèala ya dị ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ ise nke mba dum.
A maghị banyere nne na nna Ernesto Valverde. Otú ọ dị, ọ ga-ekwe omume ndị mụrụ ya kwagara mba Basque mgbe ọ bụ nwata. Enwere foto nke Ernesto na nwanyị nke ya na 70 nke nwere ike ịbụ nne ya ma ọ bụ nwunye ya.
Ernesto Valverde na mama ya. Ebe E Si Nweta FabWag
Ernesto Valverde toro na agụụ maka ide ihe, foto na bọl. O wee jiri bọl bido nke ọma nke na-akwụ ụgwọ ego, na-eduga n'ọrụ.
Ernesto Valverde Ụmụaka Akụkọ Plus Ihe Ndị Na - Ndụ Ndụ Mmalite
Ọhụụ Ernesto Valverde na-agba maka bọl hụrụ ya ka ọ debanye aha na CD San ​​Ignacio, bụ ụlọ akwụkwọ dị na Basque Country, Northern Spain.
Ná mmalite, Ernesto nwere nke ahụ mkpebi siri ike ime ka nrọ ndị ọ na-emezu mezuo, ọchịchọ ya ịkwaga ụlọ akwụkwọ mahadum abụghị nanị ihe na-agafe agafe.
Mkpebi siri ike dị otú a mere ka ọ na-aga Alavés, nke atọ na-enwe ọganihu na mba Basque mgbe Athletic Club nke Bilbao na Real Sociedad de Futbol.
Ernesto Valverde Ndụ Ndụ Mmalite. Ebe E Si Nweta Twitter
Na Alavés, Ernesto Valverde nọgidere na-eto eto ka ọ hụrụ na ọ na-edozi onwe ya n'ime ndụ na agụmakwụkwọ. O mere ọganihu dị jụụ site na ọgbọ dị iche iche ma chọta ụzọ ya n'ime ndị isi ụlọ ọrụ.
Ernesto Valverde Ụmụaka Akụkọ Plus Ihe Ndị Na - Ụzọ Ebube
Valverde na-aga Sestao na Espanyol tupu a kpọọ ya FC Barcelona ebe ọ ghọrọ nọmba ha na 1 na ihe mgbaru ọsọ.
Ernesto Valverde FC Barcelona Days. Ebe E Si Nweta Scoopnest
Ernesto Valverde nwere obi uto ka o nwee obi uto igwu egwu dika ndi joro egwu dika Johan Cruyff, bu onye na-acho Barca nke bu onye ozo maka ime ka ndi mmadu mara na 1980. Ị maara?… Valverde nyere aka n'òtù egwuregwu Barcelona nke meriri udeme UEFA na 1989.
Ernesto Valverde UEFA Winnerâ € ™ s na 1989. Ebe E Si Nweta Twitter
N'oge ọ na-egwu egwu na Barcelona, ​​ọ nọgidere na-eche nrọ ndị ọzọ. O debara aha ya dị ka nwa akwụkwọ nke foto na Institut nke Estudis Fotografics de Catalunya.
Ernesto Valverde Ụmụaka Akụkọ Plus Ihe Ndị Na - Bilie na-ewu ewu
Mgbe FC Barcelona, ​​Ernesto gara n'ihu igwu egwuregwu ndị ọzọ La Liga gụnyere Athletico Bilbao na Mallorca. Ozugbo ọ nwụsịrị, ọ malitere ọrụ nchịkwa na ngalaba ndị ntorobịa nke Athletic Bilbao, otu osisi o meriri ihe mgbaru ọsọ 44 n'oge egwu ya. A maara ya na ya nwere nkà na ụzụ na-achịkwa nke na-esonye n'ịhazi nchebe ya na ịkwado nkwado ya.
Ka oge na-aga, Ernesto kwagara Olympiacos ebe o meriri akara aha Grik na 2009 na otu ndị kwadoro naanị ihe mgbaru ọsọ nke 14.
Ernesto Valverde Olympiacos Days. Ebe E Si Nweta Mkparịta ụka
Laghachi na Spain:
Mgbe o nwesịrị ọganihu na Olympiacos, Valverde laghachiri Athletic Bilbao. N'ụlọ ọgbakọ ahụ, o debere usoro ịgba egwú site na-eduga ndị egwuregwu ya gaa na 4th site na LaLiga. Valverde mechara duru ọdum na nke mbụ ha na 31 afọ mgbe a Nchịkọta 5-1 nchịkọta nke Barcelona, ​​maka otuto nke Supercopa de España.
Ebe E Si Nweta BỤ NWA
Ọzọkwa, ọrụ ya na Europe na-ahụkwa na a na-akpọ ya onye nchịkwa kacha mma na La Liga site na UEFA.
Na 29 May 2017, obere nwoke a maara dịka "obere ant na Basque) wee nwetaghachi tiketi na Barça, otu ụlọ ọ hapụrụ maka afọ 27. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Ernesto Valverde Ụmụaka Akụkọ Plus Ihe Ndị Na - Ndụ mmekọrịta
N'ịbụ onye njikwa na-eme nke ọma, e nwere otu nwanyị mara mma aha ya bụ Juncal Díez, nwanyị onye mgbasa ozi Spanish na-aga inweta foto ya dịka oge ederede.
Ernesto Valverde mmekọrịta mmekọrịta. Ebe E Si Nweta Pinterest na TICipedia
Amaghi ihu nwunye ya, Juncal Diez na umuaka mere ka ezinulo ya buru ihe omimi. Dabere na FabWags, Di na nwunye a alụọla ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20 na ụmụ ya bụ 3 n'ọtụtụ.
Ernesto Valverde Ụmụaka Akụkọ Plus Ihe Ndị Na - Ndụ nke Onye
Ịmata Ernesto Valverde Personal Life ga-enyere gị aka ịchọta ya zuru ezu. Na ikpe site na ozi edere na ndụ mmekọrịta ya, ị nwere ike ịkọwa na Ernesto Valverde ezinaụlọ dị ka ebe ha na ndụ ha dị ndụ.
Valverde bụ onye ihere nke na-enwe ohere ya ma na-enwe oge naanị ya. Mgbe ọ bịarutere n'ụlọ, ọ na-apụ na bọlbụ na-agbakwụnye foto.
Ị maara?… E wezụga ijikwa klọb football, ọ bụ onye na-ese foto nke dị egwu igwefoto ihere. Valverde bụ nwoke nwere ọgụgụ isi ma dị nwayọọ nke na-ahụ foto dị ka otu n'ime ihe ndị kachasị amasị ya n'oge oge ya.
Ernesto Valverde Personal Life. Ebe E Si Nweta Marca
Ebe ọ bụ na ọ bụ onye na-ese foto, Ernesto Valverde bụkwa onye edemede na Medio Tiempo (Ọkara oge) bụ akwụkwọ mbụ ya.
Ernesto Valverde Ụmụaka Akụkọ Plus Ihe Ndị Na - LifeStyle
N'ịgwaghị ya, Ernesto abụghị ụdị onye na-elekọta football na-ebi ndụ Lavish. Kama ịdị ndụ buru ibu ma gosipụta akụ na ụba ya, ọ na-ahọrọ ka ọ na-agafe na obodo ọ bụla na-ese foto ya na igwefoto ya.
Ernesto Valverde Ụmụaka Akụkọ Plus Ihe Ndị Na - Eziokwu efu
Ya na Technology:
Ernesto Valverde dị oke n'iji nkà na ụzụ na-eme egwuregwu football. N'otu oge, onyeisi oche FC Barcelona Josep Maria Bartomeu kọwara ya dị ka onye ọrụ siri ike, na nwoke nwere ahụmahụ dị ukwuu na iji nkà na ụzụ na ọzụzụ na ijikwa egwuregwu. Ernesto na-eji ngwa ngwa iji soro arụmọrụ, nrụpụta ahụike ma belata ọrụ ọrụ pesky.
Ọ bụghị nwa nke atọ nkeji:
Dabere na Egwuregwu-Bekee, Ernesto abụghị onye nnukwu fan nke â € œọkara nke atọa - nke na-ekpuchi ọtụtụ n'ime mkparịta ụka ahụ na egwuregwu mgbe ọkara mbụ ma ọ bụ tupu / n'oge oge ọzọ. N'ụlọ mgbakwasa ahụ, ọ na-ahọrọ ịṅa ntị n'ikwu okwu. Egwuregwu-English Report.
Na-ege ntị na-emegharị emeghị Kama Ịgwa:
Site na oge ya na Barcelona, ​​Ernesto echetara na ọ bụ onye na-egwu egwu nke na-enwe mmasị ige ntị ma ọ bụghị ikwu okwu.
Ernesto Valverde Eziokwu efu. Ebe E Si Nweta Egwuregwu-Bekee
Ijikwa FC Barcelona bụ ihe ịma aka kasịnụ nke ọrụ ya. Mgbe ihe na-esi ike, ihe nkwonkwo Basque ya pụta.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị Ernesto Valverde Child Akụkọ nke a na-akọchaghị eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị mee ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Ryan Giggs Child Story Story Na-adịghị Ekezi Eziokwu
Jurgen Klopp Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
Bọchị agbanwee: Disemba 18, 2017